Posted by Tranquillus | Jan 4, 2019 | Ny fahaiza-manaon'ny serasera sy ny serasera
Efa ela ny mailaka no fitaovana tena ilaina amin'ny fifandraisana ara-barotra, saingy fitsapan-kevitra notontosain'ny Sendmail. Nambara fa niteraka fihenjanana, fisafotofotoana na voka-dratsy hafa ho an'ny 64% amin'ny matihanina izany.
Ahoana àry no azonao esorina amin'ny mailakao? Ary ahoana no ahafahanao manoratra mailaka manome vokatra tsara? Amin'ity lahatsoratra ity dia averintsika jerena ireo paikady azonao ampiasaina mba hahazoana antoka fa ny fampiasanao mailaka dia mazava, mahomby ary mahomby.
Misy mpiasan'ny birao amin'ny ankapobeny mandray ny mailaka 80 isan'andro. Amin'ny alàlan'ny alàlan'ny mailaka, ny hafatra tsirairay dia mety hadino mora foana. Araho ireo fitsipika tsotra ireo mba hahamarika sy ampiasaina ny mailakao.
Aza miresaka be loatra amin'ny alàlan'ny mailaka.
Manaova zavatra tsara.
Manaova hafatra mazava sy fohy.
Aoka ianao ho olo-malaza.
Hamarino ny feonao.
Aza miresaka be loatra amin'ny alàlan'ny mailaka
Ny iray amin'ireo loharanon'ny adin-tsaina lehibe indrindra any am-piasana dia ny habetsahan'ny mailaka azon'ny olona. Noho izany, alohan'ny hanombohanao manoratra mailaka, manontania tena hoe: "Tena ilaina ve izany?"
Amin'ity toe-javatra ity, tokony hampiasa ny telefaona na ny hafatra eo noho eo ianao mba hiatrehana ireo fanontaniana mety ho lohahevitry ny fifanakalozan-kevitra. Mampiasà fitaovana fandrindrana fifandraisana ary fantaro ny fantsona tsara indrindra ho an'ny karazana hafatra.
Isaky ny azo atao, dia omeo vaovao ratsy ny olona. Manampy anao hifampiresaka amin'ny fangorahana, ny fangoraham-po sy ny fahatakarana ary hanavotra ny tenanao raha diso ny hafatrao.
Ny lohatenin-gazety dia manao zavatra roa: manintona ny sainao izy io ary mamintina ilay lahatsoratra mba hahafahanao manapa-kevitra na hamaky azy io na tsia. Tokony hanao toy izany koa ny andalana lohahevitra mailakao.
Zavatra iray ny toerana banga dia azo atao tsinontsinoavina na lavina ho "spam". Mampiasà teny vitsivitsy voafantina tsara foana àry mba hilazana amin'ilay mpandray ny momba ilay mailaka.
Azonao atao ny mampiditra ny daty ao amin'ny andalana lohahevitra raha toa ka anisan'ny andiana mailaka mahazatra ny hafatrao, toy ny tatitra momba ny tetikasa isan-kerinandro. Ho an'ny hafatra mila valiny dia azonao atao koa ny mampiditra antso ho amin'ny hetsika, toy ny "Azafady alohan'ny 7 Novambra."
HAMAKY Ampiasao email
Ny andalana lohahevitra nosoratana tsara, toy ny etsy ambany, dia manome ny fampahalalana manan-danja indrindra nefa tsy mila manokatra ny mailaka akory ny mpandray. Ity dia bitsika izay mampahatsiahy ny mpandray ny fivorianao isaky ny mijery ny boaty fidirana.
Ohatra ratsy Ohatra tsara
Subject: fivoriana Subject: Fivoriana momba ny dingana GATEWAY - 09h ny 25 Febroary 2018
Hafohy mazava sy fohy ireo hafatra
Mailaka, toy ny taratasy fandraharahana nentim-paharazana, dia tsy maintsy mazava sy mazava. Tazony fohy sy mazava tsara ny feonao. Ny votoatin'ny mailaka dia tsy maintsy mivantana sy mampahafantatra, ary ahitana ny fampahalalana rehetra ilaina.
Tsy toy ny taratasy mahazatra, ny fandefasana mailaka marobe dia tsy mandany vola mihoatra ny fandefasana iray. Ka raha mila mifandray amin'olona amin'ny lohahevitra samihafa ianao dia diniho ny manoratra mailaka manokana ho an'ny tsirairay. Manazava ny hafatra izany ary mamela ny mpitatitra anao hamaly lohahevitra iray isaky ny mandeha.
Subject: Fanitsiana ny tatitra momba ny varotra
Misaotra anao nandefa ity tatitra ity tamin'ny herinandro lasa. Namaky azy io aho omaly ary mahatsapa fa ny Toko 2 dia mitaky fampahalalana manokana momba ny tarehimarika momba ny varotra. Heveriko koa fa mety ho ara-dalàna kokoa ny tonony.
Ankoatr'izay, tiako ny mampahafantatra anao fa efa nanomana fivoriana aho tamin'ity zoma ity miaraka amin'ny sampan-draharahan'ny fifandraisana amin'ny besinimaro momba ny fampielezan-kevitra vaovao. Amin'ny 11:00 maraina izy ary ho ao amin'ny efitrano fihaonambe kely.
Mba ampahafantaro ahy raha misy ianao.
Misaotra anao nandefa ity tatitra ity tamin'ny herinandro lasa. Namaky azy io aho omaly ary mahatsapa fa ny Toko 2 dia mitaky fampahalalana manokana momba ny tarehimarika momba ny varotra.
Heveriko ihany koa fa ny feony dia mety ho ara-dalàna.
Azonao atao ve ny manova azy io amin'ny heviny?
Misaotra anao noho ny asa mafy nataonao!
(Camille avy eo mandefa mailaka hafa momba ny fivorian'ny PR.)
Zava-dehibe ny fifandanjana eto. Tsy te handroboka olona amin'ny mailaka ianao, ary misy dikany ny manambatra teboka maromaro mifandraika amin'ny lahatsoratra iray. Rehefa mitranga izany, dia ataovy tsotra izany miaraka amin'ny fehintsoratra na teboka misy laharana, ary diniho ny "manapaka" ny fampahalalana ho vondrona kely sy voalamina tsara mba hanamora ny fandevonan-kanina.
Mariho ihany koa fa ao amin'ny ohatra tsara etsy ambony, Camille dia nanondro izay tiany hataon'i Michelin (amin'ity tranga ity, ovay ny tatitra). Raha manampy olona hahafantatra izay tadiavinao ianao, dia azo inoana kokoa fa homeny anao izany.
Aoka ianao ho olo-malaza
Matetika ny olona no mieritreritra fa ny mailaka dia mety tsy ho ara-dalàna noho ny taratasy nentim-paharazana. Fa ireo hafatra izay nalefanao dia fanehoana ny fahaiza-manaonao manokana, ny soatoavina sy ny fiheverana ny antsipiriany dia zava-dehibe, noho izany dia ilaina ny fomban-drazana.
Raha tsy mifandray tsara amin'olona ianao dia ialao ny fiteny tsy ara-dalàna, ny teny filamatra, ny jargon ary ny fanafohezana tsy mety. Mety hanampy amin'ny fanazavana ny fikasanao ny emoticons, saingy tsara kokoa ny mampiasa azy ireo amin'ny olona fantatrao tsara.
Fenoy ny hafatrao miaraka amin'ny "Fitiavana", "Ny andro tsara / hariva ho anao" na "Tsara ho anao", arakaraky ny toe-javatra.
Afaka misafidy ny hanao pirinty mailaka sy hizara izany amin'ny hafa ny mpandray, ka mahaiza mahalala fomba foana.
Jereo ny feo
Rehefa mihaona amin'ny olona isika, dia mampiasa ny fiteniny, ny tonon-kira, ary ny endriky ny tarehiny mba hanombanana ny zavatra tsapany. E-mail dia mandà antsika amin'ity fampahalalana ity, izay midika fa tsy mahafantatra isika hoe rehefa tsy mazava ny hafatra entintsika ny olona.
Ny teny safidinao, ny halavan'ny fehezanteny, ny mari-piatoana ary ny sora-baventy dia mora adika amin'ny fomba diso raha tsy misy famantarana hita maso sy heno. Ao amin'ny ohatra voalohany etsy ambany, Louise dia mety hieritreritra fa Yann dia kivy na tezitra, fa raha ny marina, dia mahatsiaro ho tsara.
Mila ny tatitrao aho anio amin'ny 17 ora hariva raha tsy izany dia ho diso ny fe-potoanako.
Misaotra anao tamin'ny asa mafy nataonao tamin'ity tatitra ity. Afaka manome ahy ny dikan-teninao ve ianao alohan'ny ora 17, mba tsy hohadinoiko ny daty farany?
Eritrereto ny "fahatsapana" ny mailakao ara-pihetseham-po. Raha toa ka diso hevitra ny fikasanao na ny fihetseham-po, dia hitady fomba fitenenana tsy dia mampihetsi-po amin'ny famolavolana ny teninao.
Farany, alohan'ny hanindriana ny "Alefaso", maka fotoana kely hijerena ny mailakao raha misy hadisoana tsipelina, fitsipi-pitenenana ary mari-piatoana. Ny mailakao dia ampahany betsaka amin'ny sarinao matihanina toy ny akanjonao. Noho izany dia atao tsinontsinona ny fandefasana hafatra misy hadisoana amin'ny andiany.
Mandritra ny fakana am-bavany, dia tandremo tsara ny halavan'ny mailakao. Ny olona dia mety mamaky mailaka fohy sy haingana kokoa noho ny mailaka, tsy misy fifandraisana, mba ho azo antoka fa mailaka araka izay tratra ny mailaka, tsy misy ny fampahalalana ilaina.
Ny ankamaroantsika dia mandany ampahany tsara amin'ny androntsika vakio sy manoratra mailaka mailaka. Saingy ny hafatra izay andefasantsika dia azo atao misavoritaka ho an'ny hafa.
Raha te hanoratra mailaka mahomby, dia manontania tena aloha raha tena tokony hampiasa io fantsona io ianao. Indraindray mety tsara kokoa ny mandray ny findainy.
Ampiasao ny mailakao mendrika sy mazava. Alefaso amin'ny olona izay tena mila azy ireo fotsiny izy ireo ary asehoy mazava tsara izay tianao hataon'ny mpandray anao amin'ny manaraka.
Tsarovy fa ny mailakao dia taratry ny maha matihanina anao, ny soatoavinao ary ny fiheveranao ny antsipiriany. Andramo alaina sary an-tsaina ny fomba mety handikana ny feon'ny hafatrao. Mahaiza mahonon-tena ary diniho indroa foana izay nosoratanao alohan'ny hamelezana ny "alefaso".
Ny drafitra amin'ny fanoratana mailaka mahomby May 10th, 2020Tranquillus
Teo alohaNy lanjan'ny loha-hevitra ao amin'ny mailaka matihanina
manarakaFampatsiahivana ny drafitry ny cybercourtoisie